Izindaba - Yazi ngokufanele izithasiselo zokudla eziningana
Isilawuli se-Acidity: imnandi futhi imuncu yimina
Ukuze uthole ukudla okunombala omuhle, ukunambitheka, nokunambitheka, ukunambitheka kokudla kubalulekile. Umlawuli we-Acidity uhlobo lwe-ejenti yokunambitha, ebizwa nangokuthi i-ejenti emuncu. Ukungeza izinto ezimuncu ekudleni kunganikeza abantu isikhuthazo esiqabulayo, kwandise ukudla, futhi kube nomphumela othize wokubulala amagciwane.
Ngokuvamile ihlukaniswe yaba i-inorganic acid ne-organic acid. I-inorganic acid esetshenziswa kakhulu ekudleni yi-phosphoric acid, kanti ama-acid asetshenziswa kakhulu yile:i-citric acid, i-lactic acid, i-acetic acid, i-tartaric acid, i-malic acid, i-fumaric acid, i-ascorbic acid, i-gluconic acid, njll.
I-Phosphoric acid ingathatha indawo ye-citric acid ne-malic acid embonini yeziphuzo, ikakhulukazi njenge-ejenti emuncu kuziphuzo ezingezona izithelo lapho i-citric acid ingafaneleki. Ingasetshenziswa njengesilawuli se-pH embonini yokuphuza, nanjengesixazululo semvubelo yesakhi embonini yemvubelo ukukhuthaza ukukhula kwe-cell nuclei. Ingasetshenziswa futhi ngokuhlangana nama-antioxidants emafutheni ezilwane, futhi ingasetshenziswa njengokucacisa i-sucrose liquid kunqubo yokukhiqiza ushukela.
I-citric acid ikhona ezicutshini zezitshalo nezilwane nobisi, futhi izithelo zamawolintshi zinokuqukethwe okuphezulu. I-crystalline citric acid yizinhlayiya ezimhlophe ezisobala noma i-white crystalline powder. I-anhydrous citric acid ngamakristalu angenambala noma impuphu emhlophe, ayinaphunga futhi ayinambitheki omuncu. I-citric acid ingumenzeli omuncu oguquguqukayo futhi ohlukahluka kakhulu. Inokuncibilika okuphezulu nekhono lokukhohlisa elinamandla kuma-ayoni ensimbi. Ngaphezu kokusetshenziswa njenge-ejenti emuncu ekudleni, i-citric acid isetshenziswa futhi njenge-preservative, antioxidant synergist, i-pH adjusters, njll.
I-Lactic acid ekuqaleni yayitholakala nge-yogurt, yingakho igama. I-lactic acid yokudla (okuqukethwe okungu-50%) ingasetshenziswa njenge-ejenti emuncu kuziphuzo ezibandayo, iziphuzo ze-yogurt, iwayini lokwenziwa, uviniga wokwenziwa, isosi yesosi ebabayo, ukhukhamba, njll. I-kimchi ne-sauerkraut eyenziwe nge-lactic acid fermentation ayinamphumela kuphela yesinongo, kepha futhi iba nomphumela wokuvimbela ukukhula kwamagciwane.
I-malic acid iqukethwe ngama-apula, yingakho igama. Inokunambitheka okumuncu okuthambile nokuhlala isikhathi eside. Ngokwethiyori, ingashintsha ngokuphelele noma ikakhulu i-citric acid esetshenziswe ekudleni naseziphuzweni. Ngaphansi kwesimo sokuthola umphumela ofanayo, isilinganiso esilinganisiwe singaphansi kuka-8% -12% ngaphansi kwe-citric acid (ingxenyenamba yesisindo). Ikakhulu, i-malic acid isetshenziswa ekudleni okunephunga lezithelo, iziphuzo ezinekhabhoni, njll., Okungathuthukisa ngempumelelo ukunambitheka kwezithelo zayo. E-United States, i-malic acid isetshenziswa njalo ekudleni okusha. Inani eliphakeme lihambisana nezidingo ezijwayelekile zokukhiqiza, kanti i-ADI ayidingi imithethonqubo ekhethekile.
Isilondolozi: Izikhathi ezine zonyaka maziphephe futhi zisebenzise kuqala
Izinto zokuvikela, njengoba negama liphakamisa, yizithasiselo zokudla ezisetshenziselwa ukugcina ukudla okubolayo okufana nemifino, izithelo nenyama. Ngenxa yokonga, isoseji ye-ham, amasoseji, inyama ephekiwe ekheniwe nokunye ukudla okuthengiswa esitolo kungagcina ukunambitheka kwazo isikhathi eside; ngenxa yokonga, singadla ibanga elide elithuthwe lisuka kwezinye izindawo unyaka wonke. Imifino nezithelo ezintsha.
Izilondolozi ezivame ukusetshenziswa zokudla zifaka i-benzoic acid, i-butylhydroxyanisole ne-dibutylhydroxytoluene. Phakathi kwazo, i-butyl hydroxyanisole iyisilondolozi esihle, futhi ayinabuthi ngaphakathi kokuhlungwa okulinganiselwe komkhawulo. Isilinganiso sayo esiphezulu ekudleni akumele seqe u-0.2 g / kg ngokwamafutha. Lapho umthamo wayo kungu-0.02%, ungaphezu kuka-0.01%. Umphumela we-antioxidant unyuswe ngo-10%. Njenge-antioxidant encibilikayo enamafutha, i-hydroxyanisole enamafutha ilungele ukudla okunamafutha nokudla okunothe okunamafutha. Ngenxa yokuzinza kwayo okuhle kokushisa, ingasetshenziswa ngaphansi kwezimo zokuthosa noma zokubhaka.
Eminyakeni yamuva nje, ucwaningo lwezinto zokulondolozwa kwemvelo seludonse ukunakekela okukhulu kososayensi abavela kuwo wonke umhlaba, futhi inani elikhulu lemikhiqizo yokulondolozwa kwemvelo ngokuvamile yamukelwa ngabantu, njenge-tea polyphenols, i-vitamin E yemvelo, i-polylysine ne-chitosan.
Mayelana nezithelo esizithenga ezimpilweni zethu zansuku zonke, ochwepheshe basikisela ukuthi inqobo nje uma amabhizinisi esebenzisa izivikeli mgomo ngendlela efanele, abathengi akudingeki bakhathazeke ngezinkinga zokuphepha.
Izinto zokuvikela: nweba impilo yeshalofu yokudla
Izinto zokuvikela ukudla zingavimbela ukusebenza kwamagciwane, zivimbele ukonakala kokudla, ngaleyo ndlela kwandise isikhathi sokudla. Iziphuzo eziningi nokudla okufakwe emaphaketheni kufuna ukugcinwa isikhathi eside, futhi kuvame ukwengezwa izinto zokuvikela ukudla. Njengoba kuhlobene nempilo yabantu, okokuvikela ukudla kuvinjelwe kakhulu kuzo zonke izinhlobo zokulondolozwa.
izwe lami livume kuphela izivikeli zokudla ezivunyelwe ezingaphezu kwezingama-30, konke okunobuthi obunobuthi obuncane futhi obuphephile. Ngaphambi kokuba zivunyelwe ukusetshenziswa, sebenze inqwaba yezilingo zesayensi, ezibandakanya ukondliwa kwezilwane, ubuthi kanye nokuhlolwa kobuthi kanye nokuhlonza, futhi sekuqinisekisiwe ukuthi ngeke zibangele ukulimala okunamandla, okunamandla noma okungapheli emzimbeni womuntu.
Okuvame ukusetshenziswa yi-benzoic acid, i-sodium benzoate, i-sorbic acid, i-potassium sorbate, calcium propionate, njll. Eminyakeni yamuva nje, izivimbeli ekudleni seziqalile ukuthuthuka zibhekise ekuphepheni, ekudleni, nasekungcolisweni. Kuvele okusha okuvikela njenge-glucose, i-oxidase, i-protamine, i-lysozyme, i-lactic acid bacteria, i-chitosan, imikhiqizo yokubola ye-pectin, njll. Futhi ivunyelwe ukusetshenziswa nguhulumeni.
Empeleni, inqobo nje uma izinhlobonhlobo, ubungako nobubanzi bokugcinwa kokudla okusetshenziswa abakhiqizi bokudla kulawulwa ngokuqinile ngaphakathi kwesilinganiso esichazwe kumazinga kazwelonke “Amazinga Okuhlanzeka Wokusetshenziswa Kwezithasiselo Zokudla”, ngeke kube nengozi empilweni yabantu, futhi abantu bangaqiniseka ukuthi bangadla.
Isibonelo, ukudla okubonwa emakethe kuvame ukuba nezinto zokuvikela ezifana ne-potassium sorbate ne-sodium benzoate. Lezi zivimbeli ezimbili ezisetshenziswa kakhulu zivame ukukhishwa emchameni hhayi emzimbeni ngemuva kokungeniswa ngumzimba womuntu. Buthelela.
Uma kungekho izithasiselo zokudla
Uma engekho ama-antioxidants-
Ukudla okunamafutha, noma ngabe kungamafutha emvelo ezilwane nemifino noma ukudla okuthosiwe, kuzodala ubungqabavu ngenxa ye-oxidation esikhathini esifushane. Abakhiqizi bangathosa kuphela bese bewathengisa. Abasabalalisi kufanele bavuselele amashalofu abo nsuku zonke. Abathengi balahlekelwa umuzwa wabo wokuphepha ngisho nangaphezulu. Ukuthuthwa kokudla okuhamba amabanga amade nakho kuzokwenzeka.
Uma kungekho ukulungiselela kwe-enzyme-
Amabhanisi ashubile adliwa amaShayina ngeke athambile futhi abe mnandi njenganamuhla. Abantu baseYurophu bangadla kuphela isinkwa esiqinile njengoba benza ngeNkathi Ephakathi. Ukuphela kwezinto abantu emhlabeni abangathembela kuzo isisu sabo i-asidi namathe.
Uma kungekho humectant-
Isoseji kaHamu, amasoseji, nenyama ephekiwe ekheniwe izoshiya itafula lethu, ngoba ukulahleka kukakhokho wokuqala ngesikhathi sokucubungula kukwenza kunambitheke njenge-wax ehlafunwayo; izinhlanzi, imfanzi nezinye izinhlanzi zasolwandle azikwazi ukwanelisa isifiso sabantu basemaphandleni, ngoba amaprotheni azolahleka enkambisweni yokugcina ebandayo. Ukudonswa kwesikhumba nokuqandisa nokuncibilikisa ukuncipha kuphezulu; okubuhlungu kakhulu ukuthi silahlekelwa ukubuyiselwa amanzi emzimbeni futhi asikwazi ngisho nokudla ama-noodle asheshayo.
Uma kungekho isiqinisi sokudla-
Ehlobo elishisayo, u-ayisikhilimu wethu esimnandi esimnandi uzogcwala izinsalela zeqhwa esiqandisini. Kuyadabukisa ukudla njengama-ice cubes; kubuhlungu ukulahla; ubisi lwe-cocoa, ubisi lwejusi yezithelo, i-yogurt engenza inzalo, ama-yogurts ahlukahlukene anyakazisiwe, ubisi olusebenzayo, njll. Alikwazi ukudakwa, yize ubisi olusegangeni luhlala lukhinyiwe.
Izimo zobisi olungajwayelekile nezendlalelo zamanzi ziyavela eziphuzweni. Ushukela emikhiqizweni kashokoleti kulula ukugcizelela, isinkwa akulula ukusigcina, imajarini nokudla okusemathinini kwehlukaniswa namafutha namanzi, kanti i-toffee ne-bubble gum kulula ukushibilika nokunamathela emazinyweni.
Uma kungekho-ejenti efakwayo imvubelo-
Amabhanisi ashubile athandwa ngabasenyakatho azoba madolonzima ukuyeka, namakhekhe abantu baseningizimu abathanda ukuvalelisa ngawo. Abantu ezweni lonke kumele bavalelise ngezinduku zenhlama ethosiwe esezidliwe iminyaka engaphezu kwengu-900.
Ngamafuphi, uma zingekho izithasiselo zokudla, ngeke ibe khona imboni yokudla yesimanje esezingeni eliphezulu, futhi ngeke kube khona impilo yesimanje esezingeni eliphezulu.
Umthombo: I-Article by Food Original